Dhuguma Itoophiyaan isaanii biyya haadha hundaatuu ta’uu dandeessii? -
Kanaaf,Habashootni karaa lamaan kanaa cufuu fi balleessuu barbaadu. Qawwee dhaan lollee, diina keenya injifatnee walabummaa Oromiyaa argachuu ni dandeenya kan jedhu ammaaf akkuma jirutti dhiisee (yeroo biraan bal’inaan itti deebi’a) gara hiree ofii ofiin murteeffachuu jedhutti deebi’ee, waan tokko tokko jechuun barbaada. Mee dhugaa haa dubbannu, Habashoota waliin hojjennee; isaan wajjin tumsa ijaarree; Wayyaanee kuffisnee; uummata keenya bilisoomsinee; sana booda ammoo uummatni keenya waan barbaadu akka murteeffatu; refreendamiitti geessina yaadni jedhu hafee; kanuma Wayyaaneen lafa keesse iyyuu “Article 39” yoo fudhanne, isuma kanaa dhabamsiisuuf Habashootni hammam akka carraaqan iccitii miti. Erga dhugaan kana ta’e ammoo, otuu humna keenya hin jabeessin; otuu tokkummaa keenya hin ijaarin; akkamitti isaan wajjin hojjetamee, mirgi hiree ofii ofiin murteeffachuu mirkanaa’uu danda’a?
Tags Abdii boruu Toophiyaa
Previous Gad-aantummaa aadaa fi Afaan isaaniitu isaan cinqa moo, diigamuu impaayaraatu isaan yaaddessaa?
Next Dhugaa fakkeessanii afaanfaajjii uumuun, uummata Oromootiif dubbachuu hin ta’u